Miarahaba antsika eto amin'ny Fileovana amin'ny anaran'i Jesosy,
Hatao any Orléans ny isan-telovolana ny 29 sy 30 Janoary ho avy izao. Mangataka antsika rehetra mba hanaparitaka sy hanentana ny mpianakavin'ny finoana ho tonga amin'izany fotoana izany.
Marihina fa samy hafa ny toerana ny asabotsy sy alahady.
Ny teny faneva dia : «Filazantsara, herin’Andriamanitra ho famonjena izay mino » Rom.1:16
Indro ampitaina amintsika ny >>> FANDAHARANA <<<
Aza adino ny mitondra :
vokatra na solom-bokatra
mitondra am-bavaka ny fotoana rehetra
Miantso ny komity Fileovana Paris hivory ny asabotsy ao aorian'ny fotoana amin'ny 20h.
Mirary soa antsika rehetra ary manantena ny fahatongavan'ny rehetra,
Samy ho tahiana tompoko,
Mpitan-tsoratra Fileovana Paris